အိမ်ခြံမြေ ငှါးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လှိုင်မြို့နယ်ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး မာလာမြိုင်လမ်း အကျယ်အ၀န်း(12.5x50)ပထမထပ်တွင်တည်ရှိပြီးမှတ်တိုင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။
$ 2,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (2000)sqft 7F မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ပါကေး၊ အဲယားကွန်း၊ တိုက်သစ် ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
60 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
ရွှေပြည်သာစက်မူဇုန် မြေ(2)ဧက စက်ရုံ (90'x50')(2RC) မြေဖို့အုတ်ခတ်ပြီး မီး 315 KVA ငှား 1လ 60သိန်း(ညှိနိုင်း)
၁၄၀၀စတုရန်းပေ၊ ပေ၂၀×ပေ၇၀၊ မြေညီထပ်၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်
13 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မြေနီကုန်း မြေနုလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း ၊ အဲကွန်း(၄)လုံး ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျှေ်စက် ရေပူရေအေးစက် ၊ TV ၊...
09760811737, 09445300009, 09972952656
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်းတွင် အာစီသုံးထပ်တိုက် ငှားမည်။
60 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
-	မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်း -	အာစီ ၃ ထပ် တိုက်ကောင်း -	၃၆၀၀ စတုရန်းပေ (ပေ ၄၀ × ပေ ၉၀) -	မာစတာအိပ်ခန်း ၅ ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း...
ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒိုတွင် ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါရှိသော ကွန်ဒိုအခန်း ငှားမည်။
ဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒို ကမ္ဘာအေး 1650sqft >20Ls > မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း / ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း / ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး တည်နေရာအနေအထားအရ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သော...
၇၅ပေ × ၁၇၅ပေ ၊ ဂိုဒေါင်
57 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
အုတ်ကျင်း သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်နား ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြေတွဲသုံး ဂို( 75'×175' ) ရေမီး အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
အင်းဝအိမ်ရာတွင် (85x85) အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (85x85) 2RC 1MBR,4BR,AC,ပါကေး ပါဝင်သော လုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊(16)လမ်းတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။(12.5×50) sqft ရှိသည်။1S၊2AC ပါသည်။3F+4F တွင်တည်ရှိသည်။ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
One Storey RC Building House for Rent in9Mile
8 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
Ma Yan Gone Township,9Mile, Ma Soe Yein Street, 1RC (Bangalo), Rental price=8 L,
09-788906063, 09-774922299, 09-773922299, 09-421969664
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် တွင် ဂိုဒေါင် ငှားမည်။
20 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင် >150’x150’ >20Ls မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် ကျောင်းများ၊ ဈေးများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကားမှတ်တိုင်တို့နှင့်လည်း နီးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
12 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်လမ်းမ၏ဂုတ်ကွက်ပေါ်ရှိ ခြောက်ထပ်တိုက်၏ မြေညီထပ်။ အကျယ်အ၀န်း 20x50 ပေရှိသော Hall Type ကားပါကင်တစ်နေရာစာပါရှိသော မြေညီထပ်အငှားဖြစ်သည်။
ShweLinBan Inustrial Zone for Rent . (ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက်ငှားရန်ရှိပါသည်)
Location : ShweLinBan Industrial Zone , Hlaing Tha Yar Tsp , Area : Land (1 Arca) ၊ Depot (7200 Sqft) ၊ Type : Land and Depot * 400 KVA , Office တည်နေရာ - ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန် ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ အကျယ်အဝန်း - မြေ (၁ ဧက) ၊ ဂို (၇၂၀၀ စတုရန်းပေ) ၊ အမျိုးအစား - ဂိုဒေါင် + မြေ * 400...
09-5041674 , 09-531314
New Ecellent Condo တွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
$ 2,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
- New Excellent Condo (အလွှာမြင့်) - 1800 Sqft, 2000 U$ - မာစတာ(၁)ခန်း၊ အိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေးခင်း 1M, 2B, ပါကေးခင်း
$ 4,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး နေရာအချက်အချာကျသောနေရာဖြစ်သည်။ပေ 70×70အကျယ်ရှိပြီ 4Master Bedroom,1Bedroom ဖွဲ့ထားသည်။7Air Con,Fully Furniture ပါဝင်သည်။ဈေး၊ကျောင်း၊City Mark...
09 250 434 800,09 250 435 400
25 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
တည်နေရာ = ၇မိုင်၊အောင်တေဇလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ အကျယ်အ၀န်း = 3310 Sqft,(100'/30'×50'/100') အမျိုးအစား =2RC,5-MBR,1-SBR,1-Maid Room,Including A/C,Jaccuzi ဈေးနှုန်း = 25Lakh/1month (Negotiate) မှတ်ချက် - ကားပါကင်(၆)စီးဆန့်ပါသည်။
ဒဂုံမြို့နယ် ကွန်ဒို တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
$ 1,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ဒဂုံမြို့နယ် ကံကော်ကွန်ဒို (1800sqft) . မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း . ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း . အဲကွန်း . ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ . ပါကေး $1500 ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသဖြင့် အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံ၊...
၆၀ပေ × ၉၀ပေ ၊ ၂ ထပ်တိုက် လုံးချင်းအိမ် (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
မရမ်းကုန်း ၊ ၉မိုင် ၊ အေ၀မ်းလမ်းသွယ် ၊ ရန်ကုန် မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း ၊ အဲကွန်း -4လုံး ၊ ဖုန်းပါဝင် ၊ ပါကေးခင်းထား ၊ (60x90)ပေ နေထိုင်ရန်...
0943098621, 09428013834, 09444439412
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊မြယမုံကမ်းသာယာအိမ်ရာတွင်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိပါသည်။(40×60) sqft ရှိသည်။2RC...
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမြန်ငှားမည် Star City Condo
$ 1,250 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
သန်လျင်မြို့နယ်တွင် (900)sqft 10F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ပါကေး၊ ပရိဘောဂပါ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
$ 3,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
- ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ အလွှာမြင့် - 2100 Sqft, - အိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ အဲကွန်း(၃)လုံး၊ Office Type,
မင်းဓ္ဓမလမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး နှစ်ထပ်တိုက် ငှားမည်။
$ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
* Location - Mayangone Township Mindama Housing * Area - 10000 sq.ft * Property type - Two storey RC Building Rooms formation -6master bedrooms - Living room and kitchen Other features -9Air conditioning units - Land line phone included Located in Mayangone Township which has decent transportation.5min drive to MICT Park,Junction (8) City Mart,(9) Mile OCEAN.
ရုံးခန်းဖွင့်ရန် ကောင်းမွန်သော မြေနီကုန်းကွန်ဒိုဌားမည်
မြေနီကုန်းကွန်ဒို 1300sqft> 15Ls> မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း / ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း / အဲကွန်း ပြင်ဆင်ပြီး / <ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်> စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး နေရာထိုင်ခင်း...
မင်းဓမ္မ ဗီလာ လုံးချင်းတိုက် ငှားရန်ရှိသည်။
70 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်း၊မင်းဓမ္မအိမ်ရာဝန်း၊ခြံအမှတ် A-6 (6000Sqft) Land area nearly(1000Sqft) 7MBR,ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေမီးအစုံ ၊ ကား (၈)စီးရပ်လို့ရ၊ ကားပါကင်ပါ ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး...
House for Rent in9Mile, Mayangone Tsp.
$ 3,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
Ma Yan Gone Township,9Mile, A1 Street, 2.5 RC, Rental Price = $3000
42လမ်း ကွန်ဒိုတွင် အခန်းငှားရန်ရှိသည်
14 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်တွင် (25x50) ကျယ်ပြီး 1MBR,2BR,AC,Ph,Fully Furniture ပါဝင်သော ကွန်ဒိုခန်းငှားရန်ရှိသည်။
ဗဟန်း ရွှေတောင်ကြားတွင် နေထိုင်ရန်သင့်တော်သောလုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
$ 2,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ဗဟန်း ရွှေတောင်ကြား လုံးချင်း ၁ထပ်ခွဲ (60x60) 3MBR,1BR,5AC,Furniture ပါကေး နေထိုင်ရန် ရုံခန်းများဖွင့်ရန်သင့်တော် မြန်မာပလာဇာ၊အင်းယားကန်၊ဘဏ်များ၊ကျောင်းများနှင့်နီး နေရာသန့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း...
(7) မိုင် ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်းသွယ်တွင် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းတိုက်ငှားမည်။
$ 6,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
အကျယ်အ၀န်း 80 ပေပတ်လည်ရှိပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး နေရာကောင်း လုံးချင်းအငှားဖြစ်သည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ 2ထပ်လုံးချင်း၊ 40'x60', 3MBR,1BR, ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊အသင့်နေထိုင်နိုင်
Grand Nawaday Condo တွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
18 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
- 2100 Sqft -2Master Room, 1 Single Room,5air-con, Car-parking Fully Furniture, ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
10 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ရှိ သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင်တည်ရှိပါသည်... အကျယ်အ၀န်း (16 x 50) ပေ ကျယ်ဝန်းပြီး ၊ ကျွန်းပါကေးခင်းထားပါသည် ၊ လူနေ ၊ ရုံးခန်းများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
၁၆၈၄စတုရန်းပေ ၊ Green Sayar San ကွန်ဒို (အလွှာနိမ့်) ၊ ပရိဘောဂပါပြီး
$ 2,200 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း ၊ အဲကွန်း(၄)လုံး ၊ ကားပါကင်ပါ ၊ ရေကူးကန်ပါ ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၁)လုံး ၊...
ဓနလှိုင်ကွန်ဒို တွင် ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားရန်ရှိသည်။
စမ်းချောင်း မြို့နယ်တွင် (20x60) ကျယ်ပြီး 2BR,AC,ကြွေခင်းထားသော ကွန်ဒို အခန်းငှားရန်ရှိသည်။
Special Decorated of MinDaMa Condo for Rent . (အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော မင်းဓမ္မကွန်ဒိုခန်း ငှားရန်ရှိပါသည်)
$ 2,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Location : MinDaMa Condo , MayanGone Tsp , Yangon , Area : 2380 Sqft Type : Condo Roomtype : 1- Master Bedroom , 2- Single Bedroom , 5- AC , Fully- Furniture , Fully funished condo , ready to stay တည်နေရာ - မင်းဓမ္မကွန်ဒို ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ အကျယ်အဝန်း - ၂၃၈၀ စတုရန်းပေ အမျိုးအစား -...
အောင်မြေသာစည်အိမ်ရာ တွင် (75x74) အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (75x74) အိမ်(50x50) 6MBR,4AC,F.Fur 3RC ပါဝင်သော လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
Star City Tower B4 ၅လွှာတွင် ကွန်ဒို အခန်းငှားရန်ရှိသည်။
$ 1,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
******************************** တန်ဖိုးထားရသော သူငယ်ချင်းများ ခင်မျာ Star City သန်လျင် Tower B4 တွင် Condominium ၂ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ အခန်းများ၏ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာမှာ ၉၃၀ စတုရန်းပေ ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းတွင် Master Bed Room 1ခု၊...
09459943920, 095132343, 09955132343, 09787189717
၃၇ပေ × ၁၅၀ပေ ၊ ဂိုဒေါင်
အုတ်ကျင်း သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်နား ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြေတွဲသုံး ဂို( 37'×150' ) ရေမီး အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
Two Storey RC House for Rent in A1 Street
$ 7,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
Ma Yan Gone Township,9Mile, A1 Street, 2RC, Rental Price = $7000 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး တည်နေရာအနေအထားအရ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သော နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဈေးများ၊ ကျောင်းများ၊ ကားမှတ်တိုင်များ၊ ဆေးခန်းများ...
အင်းစိန်ပေါက်တောဝရှိ ကွန်ဒို တိုက်ခန်းများ ငှားရန်ရှိသည် ။
1 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
(15'x40'), ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)၊မာစတာခန်း(၁)ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊မီးဖိုချောင်၊ရေချိုးခန်း အိမ်သာ(၂)စုံပါ၊ ပထမထပ်မှ အဌမထပ်ထိ ၊ဓာတ်လှေခါးပါ၊ ရေ၊မီး ၂၄နာရီ၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုပါ၊...
(50x70) ပေ . မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , အဲကွန်း , ပရိဘောဂ . 1½RC ကမာရွတ် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော လုံးချင်း အိမ်အား အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ငှားရန်ရှိသည်
160 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
မြေ ( 2.1 )ဧက ဂို( 140'×300') 315KVA 160သိန်း
Two Storey RC Building for Rent in Mayangone Tsp. (၇မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် လုံးချင်းအိမ်ငှါးရန်ရှိသည် ။)
* Location -7Miles, Pyay Lane, Mayangone Tsp. * Land size - 3600 sq-ft (60' x 60') * Two storey RC Building *4Master bedrooms, living room, kitchen, bathrooms and toilets *6Air cons, Fully furniture, Generator * It is very good for living * 35 Ls per month (7)မိုင် ၊ ပြည်လမ်းသွယ် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မြေ(60’x60’) , 2RC , 4MBR , 6AC , Full furni , မီးစက်ပါ ၊...
Crystal Tower junction square အနီးရှိ အခန်းငှားမည်
(950 sqft)1MBR, 1BR, fully furnished
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံတွင် ဂိုဒေါင် ၁ထပ် ငှားရန်ရှိသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းတွင် ဂိုဒေါင်အကျယ်(240x80) ကျယ်ပြီး 150KVA ပါဝင်သော ဂိုဒေါင် အမြန်ငှားမည်။
Two Storey RC House for Rent in Bahan
$ 15,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
Bahan, Aung Zay Ya (1) Street, 2RC, Rental Price = $15000 ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လူနေထူထပ်လှသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလည်း ဖူးမြော်ကုသိုလ်ယူနိုင်သည့်...
09-788906063, 09-774922299, 09-773922299, 09-421969664.
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းယားရိပ်သာလမ်းတွင် အာစီနှစ်ထပ် လုံးချင်းအိမ် ငှားမည်။
17 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
•	မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းယားရိပ်သာလမ်း •	အာစီနှစ်ထပ် တိုက် •	၂၈၀၀ စတုရန်းပေ (ပေ ၄၀ × ပေ ၇၀) •	မာစတာအိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊ ဧည့်ခန်းကျယ်၊ မီးဖိုခန်း နှင့် ထမင်းစားခန်း၊ရေချိုးခန်း...
၂၅ပေ × ၆၀ပေ ၊ ပထမထပ် မီနီကွန်ဒို (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ပေ 25 x 60 , 1st floor , lift ပါ , ပြင်ပြီး အသစ်ဆက်ဆက် တိုက်ခန်း ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း , ဝန်ကြီးများရုံးအနီး၊ စိန်ဂေဟာ အနီး ရုံးခန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ရန် နေရာကောင်း...
$ 1,600 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
- ယောမင်းကြီးကွန်ဒို၊ အလွှာမြင့် - 1900 Sqft, - မာစတာ(၁)ခန်း။ အိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲကွန်း(၄)လုံး၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ
Unitect Condo တွင်(1800sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်
$ 1,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
လမ်းမတော်မြို့နယ် တွင် (1800sqft) 1MBR,2BR,AC,F.Fur ပါဝင်သောကွန်ဒို အမြန်ငှားမည်။
၂၀၀၀ စတုရန်းပေ၊ Central City ကွန်ဒို၊ ဒုတိယထပ်၊ (ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါဝင်)
လိပ်စာ အမှတ် (၂၆-A)၊ Central Cdity Condo ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ မာစတာအိပ်ခန်း (3) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း (4)...
Two Storey RC House for Rent in Shwe Hnin Si 5th Street
$ 2,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
Ma Yan Gone Township,9Mile, Shwe Hnin Si (5) Street, 2RC, Rental Price=$2500
Well Located House for Rent in Inyar Myaing Street
Bahan, Inyar Myaing Street, 2RC, Rental Price = $7000, ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လူနေထူထပ်လှသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလည်း ဖူးမြော်ကုသိုလ်ယူနိုင်သည့်...
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (22 x 55) 1F ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရွှေတောင်တန်းလမ်းတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။(12.5×50) sqft ရှိသည်။Hall type ဖြစ်သည်။ပါကေးခင်းထားသည်။ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။3F+4F တွင်တည်ရှိသည်။
၁၅၀၀ စတုရန်းပေ ၊ GEMS Condo (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
လှိုင် ၊ ရန်ကုန် မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း ၊ အဲကွန်း -5လုံး ၊ ပါကေးခင်း ၊ ရေကူးကန်ပါ ၊ (1500sqft) ၊ Gym,Play Ground နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်ရန်သင့်တော်...
ပြည်လမ်း၊ (၈)မိုင်အနီးတွင် လုံးချင်း(၃)ထပ်တိုက်ငှားရန်ရှိပါသည်။
21 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
- 40' x 50' -4Master Room,2Single Room, 4Air-con, Water Heater, လိုင်းဖုန်း၊ - တိုက်သစ်၊ - ဘိုးဘွားပိုင်မြေ
တိုက်ခန်းအမြန် ငှားရန်ရှိပါသည် ယုဇနလမ်း ရေကျေ်ာ
5.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် (1700)sqft 2F မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ရေပူရေအေး၊ တိုက်သစ်၊ ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ထားသော တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
Diamond Condo တွင် အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒို အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
ကမာရွတ် မြို့နယ် Diamond Condo (1350 sqft) မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ ,Pool& Gym တွင် ကွန်ဒို အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
01 248209, 09 4200 97550, 09 7811 39940
စမ်းချောင်းမြို့နယ် သပြေညိုလမ်းတွင် ဈေးနှုန်းတန်တိုက်ခန်းငှားမည်။
အကျယ်အ၀န်း 13x55 ပေရှိသည့် သုံးလွှာ ဟောင်ကောင် ၂ လွှာတိုက်ဖြစ်သည်။နေထိုင်ရန်ကောင်းသည့် ဈေးနှုန်းတန်တိုက်ခန်း အငှားဖြစ်သည်။
09 97790 1508
အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းရှိ အ၀ိုင်းလေးကွန်ဒိုတွင် ပရိဘောဂပစ္စည်းများပါသောအခန်းငှားရန်ရှိသည်။...
အ၀ိုင်းလေးကွန်ဒို အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း (1350sqft) 1MBR,2BR,5AC,Furniture ပါကေး နေထိုင်ရန် ရုံးခန်းများဖွင့်ရန်သင့်တော် ရန်ကင်းစင်တာ ၊စူပါဝမ်း၊ဘောက်ထော်၊ကျောက်ကုန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိ...
ယောက်လမ်းကွန်ဒို တွင် (17x60) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (17x60) 1MBR,1BR,3AC,F.Fur ပါကေး ပါဝင်သော ကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင် ၂ လုံးပါသော စက်မှုဇုန် မြေ ငှားမည်။
248 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန် မြေအကျယ် - ၁.၅ ဧက (၆၅၃၄၀ စတုရန်းပေ) ဂိုဒေါင် - ၁၂၀၀၀ စတုရန်းပေ (၇၅ ပေ × ပေ ၁၆၀) ဂိုဒေါင် - ၂၂၅၀၀ စတုရန်းပေ (၇၅ ပေ × ပေ ၃၀၀) ၁ စတုရန်းပေ ကို ၃၈၀ ကျပ် နှုန်းဖြင့် ငှားမည်။ East Dagon...
ဘုရင့်နောင်တာဝါ တွင် (1500sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် (1500sqft) 1MBR,2BR,2AC,ပါကေး ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
လှိုင်မြို့နယ်တွင် ကွန်ဒို တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်မြို့နယ် GEMS Condo (900sqft) 1MBR 1BR A/C Fullyfurinture $1500 carparking swimmingpool GYM view ကောင်း
40 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊(၇)မိုင်ပြည်လမ်းမတွင်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။(80×50) sqft ရှိသည်။1BN အမျိုအစားဖြစ်သည်။ဆိုင်ဖွင့်ရန်ကောင်းသည်။ရေမီးပါသည်။
Three Storey RC House for Rent in Mayangone Tsp.
Ma Yan Gone Township,9Mile, Shwe Hnin Si Main Road, 3RC, Rental Price=$15000 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး တည်နေရာအနေအထားအရ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သော နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဈေးများ၊ ကျောင်းများ၊ ကားမှတ်တိုင်များ၊...
၁၈၀၀ စတုရန်းပေ ၊ မိုးမြင့်စံကွန်ဒို (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် - 1800 Sqft - မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း ၊ ရေပူရေအေး ပါ ၊ ပါကေးခင်း ၊ အလွှာမြင့် ကျောင်းနီး ၊ ဈေးနီး ၊ မှတ်တိုင်နီး ၊...
ဗဟန်း ကန်တော်ကြီးအနီး နတ်မောက်လမ်းသွယ်တွင် ပြင်ဆင်ထားသော ခြံကျယ်လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။...
$ 5,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ဗဟန်း နတ်မောက်လမ်းသွယ် လုံးချင်း ၂ထပ် (100x00) 5MBR.1BR,8AC,Ph,ပါကေး မြက်ခင်း မီးစက် ပြင်ဆင်ထား နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်ရန် ရုံးခန်းများဖွင့်ရန်သင့်တော် နေရာကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့်...
ကမာရွတ် Crystal Tower အခန်း ငှားရန်ရှိသည်
လူနေထိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော (1021 စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းသည့်အခန်းဖြစ်သည်.. အခန်း (1MBR , 1BR) ခန်းဖွဲ့ပေးထားပြီး Aircon တပ်ဆင်ထားပါသည်... ပရိဘောဂများ အပြည့်အစုံပါဝင်သည်... အဆင့်မြင့်...
ခပေါင်းလမ်း၊မြရတနာလမ်းသွယ်၊၆မိုင်ခွဲ၊ 1ထပ်ခွဲလုံးချင်း၊ အကျယ်အ၀န်း(75'x85'), 4MBR, ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊အသင့်နေထိုင်နိုင်
မရမ်းကုန်း ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒိုတွင် ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားရန်ရှိသည်။
$ 1,700 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
မရမ်းကုန်း ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒို ကမ္ဘာအေးလမ်းမ (1750sqft) 1MBR,2BR,4AC,Furniture ပါကေး ပြင်ဆင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်ရန် ရုံးခန်းများဖွင့်ရန်သင့်တော် ကမ္ဘာအေးဘုရား၊ဂမုန်းပွင့်၊Yangon International...
၁၄၀၀ စတုရန်းပေ ၊ မြရိပ်ကွန်ဒို (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း ၊ အဲကွန်း -4လုံး တပ်ဆင်ထား ၊ ပရိဘောဂပါပြီး ၊ ကားပါကင်ပါ ၊ ရေကူးကန်ပါ ၊ 1400 Sqft သွားရေးလာရေးလွယ်ကူ ၊ ကျောင်းနီး...
ကိုင်းတန်းလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ် တွင် လုံးချင်းအိမ်ဌားရန်ရှိသည်။
တည်နေရာ = ကိုင်းတန်းလမ်း၊အနော်ရထာလမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းကြား၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။ အကျယ်အ၀န်း = (25'×50') အမျိုးအစား = 2RC ,အခန်း(၃)ခန်းပါ၊ Aircon(8)လုံးပါ ဈေးနှုန်း = 35Lakh/month (Negotiate)
ဗဟန်း မှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ငှားမည်
* Location - Bahan Township, * Area - 3600 sqft * Property type - Two storey RC Building Rooms formation -3master bedrooms &2Bedroom - Living room and kitchen - Fully Funiture Other features -7 Air conditioning units - Land line phone included Located in Bahan Township which has decent transportation. The property is near Peral Condo,5 min drive to Myanmar Plaza,Market Place(Dhamazedi Rd)
မင်းဓမ္မလမ်း မင်းဓမ္မအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး နှစ်ထပ်တိုက်
* Location - Mayangone Township Mindama Road * Area - 10000 sq.ft * Property type - Two storey RC Building Rooms formation -5master bedrooms - Living room and kitchen Other features - Generator - 8 Air conditioning units
- မော်တင်တာဝါ (အလွှာမြင့်) - 1450 Sqft -3Master, 5Aircon, Fully Furnished, Carparking, Swimming Pool, GYM
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ (SOHO) တွင် (1400sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် တွင် (1400sqft) 1MBR,2BR,AC,F.Fur ပါကေး ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
- အာတီးယားကွန်ဒို (အလွှာမြင့်) - 1200 Sqft - မာစတာ(၁)ခန်း၊ အဲကွန်း(၅)လုံ၊ ပါကေးခင်း၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံနှင့် အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။/ (1M, 5A/C, F.F, ပါကေးခင်း)
GEMS Condo fully furnished ဌားမည်
လှိုင်မြို့ နယ်ရှိ GEMS Condo တွင် လူမနေထုိုင်ရသေးသော Condo အသစ်စက်စက်၂ ခန်း ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တုိုင်ငှားမည်။ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။
1600 sqft ၊ MMG Tower ၊ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ၊ ပရိဘောဂပါပြီး
MMG Tower,strand road , between 41 & 42 street, Botataung Township. 1650 sqft ကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း (၁) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂) ခန်း၊ aircon (4) လုံး၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါပြီး၊ အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီး
$ 3,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
လှိုင်မြို့နယ်၊(၆)မိုင်ခွဲပြည်လမ်းအနီးတွင်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။(95×100) sqft ရှိသည်။5Mbr၊10AC၊Phone ပါသည်။ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။3RC...
ဗိုလ်မြတ်ထွန်လမ်းမ(အလယ်) ရှိ လူနေ၊ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်သင့်သော ကွန်ဒိုအခန်းငှားမည်
(25 x 60 ) 7F, 1MBR,1BR, A/C
ပုဇွန်တောင် City Mart အပေါ် Ye Kyaw Complex ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။
ပုဇွန်တောင် ရေကျော်ဈေးသစ် City Mart အပေါ်ထပ် ၇လွှာ ကွန်ဒို2Master Bedrooms,2Bedrooms, 1 Store, 1 Dining room, 1 Kitchen,3Bathrooms, 1 Bathtub,4Air-Cons ကျွန်းဆက်တီတစ်စုံ၊ ကျွန်းအိပ်ရာနှစ်လုံး၊ ဘုရားစင်၊ ကျွန်းဘီဒိုနှစ်လုံး၊...
House for Rent in9Mile
Ma Yan Gone Township,9Mile, Mya Ta Da Nar, 2RC = $3500
ကမာရွတ် မြို့နယ်တွင် (1650sq) ကျယ်ပြီး 1MBR,1BR,4AC,Fully Furniture,ပါကေးခင်းထားသော ကွန်ဒိုခန်း ငှားရန်ရှိသည်။
လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည် ပြည်လမ်းသွယ် ၇မိုင်
$ 4,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် (80 x 80) 2RC မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိပါသည်
ချမ်းသားလမ်းတွင် (20x60) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင် (20x70) 1MBR,1BR,3AC,ပါကေး ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
Fully Furnished of Star City Condo for Rent . (ပရိဘောဂအပြည့်အစုံဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုခန်း ငှားရန်ရှိပါသည်)
$ 1,350 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Location : Star City Condo , ThanLyin Tsp , Yangon . Area : 1180 Sqft Type : Condo Roomtype : 1- Master Bedroom , 2- Single Bedroom , Fully- Furniture , Fully funished condo , ready to stay . တည်နေရာ - Stay City Condo , သံလျင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ အကျယ်အဝန်း - ၁၁၈၀ စတုရန်းပေ အမျိုးအစား - ကွန်ဒို ...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းတွင်ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။(20×60) sqft ရှိသည်။Hall ဖြစ်သည်။ပါကေးခင်းထားသည်။ရေမီး၊ဘိုထိုင်ပါသည်။
ပြင်ဆင်ပြီး ကံကော်ကွန်ဒိုတွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
- 1700 Sqft -2Master Room, 1 Single Room, Air-con, Fully Furniture, Carparking, ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
အောင်မြေသာစည်၊ ပုလဲလမ်း၊ ကမာရွတ်တွင် လုံးချင်းအိမ် ငှားမည်။
50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
အောင်မြေသာစည်ပုလဲလမ်း ကမာရွတ် 80’x80’>50Ls>2RC> မာစတာအိပ်ခန်း -6ခန်း / အဲကွန်း / ဖုန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး သင်တန်းကျောင်းများ၊ ရုံးများစွားတို့နှင့်လည်း မလှမ်းသောကြောင့်...
Star City Condo 1200 Sqft For Rent in Thanlyin Township
$ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Location- Star City (Thaniyin) A1 Rent - U$ 1300 (one month) fully furnished,Negotiate Ready to stay,4A/C,washing machine Fridge 1,1200sqft,1MBR,2 Single Bed Room,Living Room,Kitchen Room,Dining Room (River and Garden View) Car Parking,Security,Lift,City Mart,Cafe,YKKO,many shops Gyms,spa,Swimming Pool (need to pay for entrance fees) Sky Net ,Internet Can negotiate
09 5189558, 09 796305223
လှိုင်မြို့နယ်MICT Parkအနီး ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။
သာကေတမြို့နယ်၊မြင်တော်သာလမ်းတွင်တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်။(1200 sqft) ရှိသည်။3F တွင်တည်ရှိသည်။1Mbr၊2Br၊3AC...
စမ်းချောင်းလမ်းကွန်ဒို တွင် (20x70) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
စမ်းချောင်းလမ်းမ တွင် (20x70) 1MBR,1BR,AC,ပါကေး ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
Two Storey RC House for Rent in Shwe Hnin Si Street Yeiktha
Ma Yan Gone Township,9Mile, Shwe Hnin Si Yeikdar, 2RC, Rental Price=25 L
သာယာရွှေပြည်လမ်း ရန်ကင်းမြို့နယ် အာစီနှစ်ထပ် အိမ် ငှားမည်။
သာယာရွှေပြည်လမ်း ရန်ကင်းမြို့နယ် 40’x80’>35Ls > ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -3ခန်း ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေ သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Passport ရုံးကြီး၊...
6 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ထားသည့် အာစီနှစ်ထပ်တိုက် ငှားမည်။
ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ (50’x55’) 2RC, 3MBR, 3BR, Aircon(4), Ph(1), Carpark၊ ပြင်ဆင်ပြီး၊ ပါကေးခင်း၊ 2RC ၊ တစ်လ ငှားရမ်းခ (25) သိန်း။
အလုံ Orchid Condo အလုံလမ်းမတွင် နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်ရန်သင့်ေ...
အလုံ Orchid Condo အလုံလမ်းမ (2050sqft) 3MBR,4AC,Furniture ,Skynet ,Internet ပါကေး Swimming Pool ၊ Gym နိုင်ငံခြားသား နေုထိုင်ရန် ရုံးခန်းများဖွင့်ရန်သင့်တော် နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၊ တော်ဝင်စင်တာ ၊City Mall၊ စိန်ဂေဟာ ၊လွှတ်တော်ရုံး...
Two Storey RC House for Rent in Ma Soe Yein 3rd Street
Ma Yan Gone Township,9Mile, Ma Soe Yein(3) Street,2RC , $2500
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကုန်းလမ်း (35×70) 5MBR 1BR 6A/C fully furinture 3RC အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးလူနေ ထိုင်ရန်နှင့်ရုံး ခန်းဖွင့်ရန်ကောင်း
0943089164 .09799231198 .09788598020
၁၆ပေ×၆၃ပေ ၊ သံဈေးကွန်ဒို (အလွှာမြင့်)
5 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
လသာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း ၊ အဲကွန်း(၂)လုံး ၊ ပါကေးခင်းထား ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၁)လုံး ၊ ၁၆ပေ×၆၃ပေ။ သွားလာရန်လွယ်ကူ စိတ်ပါဝင်စားပါက...
ဦးကွန်းဇော် ကွန်ဒိုတွင် ပရိဘောဂအစုံ အသင့်နေအခန်းငှားမည်။
လှိုင်မြို့နယ်ကန်လမ်းမ(အင်းယားကန်အနီးပြည်လမ်းမအနီး)အကျယ်အ၀န်း 1750 စတုရန်းပေရှိပြီး 1 Master Bedroom,3Single Bedrooms ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ aircon5,FullyFurniture,Carparking,Security အသင့်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ် တွင် (25x50) 1MBR,1BR,AC,ကြွေခင်း ပါဝင်သော ကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
Star City Condo တွင်အခန်းငှားရှိသည်။
Star City Condo, အလွှာနိမ့် - 1200 Sqft - 1 Master,2Single,4Aircon, Garden View, River View
* 625sqft, ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် 44လမ်းတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
_ 12.5×50 _ 1F _ ဈေးနှုန်း *** 3သိန်း *** _ သွားလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန် _ နေထိုင်ရန်သင့် နေရာကောင်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ဝေဇယန္တာလမ်းမတွင်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။(40×60) sqft ရှိသည်။2RC အမျိုးအစားဖြစ်သည်။3Mbr၊2AC၊ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ဆိုင်ဖွင့်ရန်ကောင်းပြီးဝေဇယန္တာ City...
လိပ်စာ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမအနီး ၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း ၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း...
09452888388 ,09255743875, 09264861700
၄၀၀၀ စတုရန်းပေ ၊ ၃ ထပ်ခွဲတိုက် လုံးချင်းအိမ် (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
$ 4,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
စမ်းချောင်း သီရိမင်္ဂလာလမ်း ၊ ရန်ကုန် _ 4000 sqft _ RC3ထပ်ခွဲ (ညှိနှိုင်း) *** _ Master bedrooms7_ Air-cons 8 _ ပြင်ဆင်ပြီး _ ကား5စီးဆံ့ _ ကားဂိုဒေါင်က Auto Door _ သွားလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်
အမျိုးသားကဇာတ်ရုံအနီးရှိ န၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
- န၀ရက်ကွန်ဒို (အလွှာနိမ့်) - 1700 Sqft -2Master,4air-con, Fully Furnished, ပါကေးခင်း
လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိပါသည် ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ I ရှုခင်းသာလမ်း
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (50 x 70) 2.5RC မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၉)လုံး၊ ပါကေး၊ ပရိဘောဂပါ၊ ပြင်ဆင်ထားသော ...
(15) လမ်းကွန်ဒို၊ အလွှာမြင့် - 30' x 45' - မာစတာခန်း(၂)ခန်း၊ အဲကွန်း(၃)လုံး၊ ရေပူ/ရေအေး၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (1260)sqft 2F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၄)လုံး၊ ရေပူရေအေး၊ ရေကူးကန်ပါ၊ ပရိဘောဂပါ ပြင်ဆင်ထားသော...
$ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
အကျယ်အ၀န်း 1760 စတုရန်းပေရှိပြီး2Master Bedrooms, 1 Single Bedroom, Living Room, Made Room , Dinning Room တို့ပါရှိပြီး ပရိဘောဂအစုံပါရှိသည်။ ရွှေဟသာင်္ကွန်ဒိုသည် နေရာကောင်းတွင် တည်ရှိပြီး ပြည်လမ်းအနီးတွင် ရှိသည့်အပြင်...
21 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
အုတ်ကျင်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြေတွဲသုံး ဂို( 37'×150' ) ရေမီး အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
၄၅ပေ×၉၅ပေ ၊ ၂ ထပ်ခွဲ လုံးခြင်းတိုက် ၊ ပရိဘောဂပါပြီး
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ၇ မိုင်၊ သလ္လာဝတီလမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း ၊ အဲကွန်း(၇)လုံး ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၁)လုံး ၊...
အာတီးယားလမ်းကွန်ဒို တွင်(1650sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
ကမာရွတ် မြို့နယ်တွင် (1650sqft) အကျယ်ရှိ1MBR,1BR,AC,Ph,Fur အစုံပါသော ကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
ပေ (12.5 x 50) ရှိမြေညီတိုက်ခန်းအမြန်ငှားရန်ရှိသည် ဗန္ဓုလလမ်းမပေါ်
8.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် (12.5 x 50) GF ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ RCခင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၇)မိုင်၊ 2ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ အကျယ်အ၀န်း(85'x85'), ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
ပြုံးပြုံးလေးကွန်းဒို၊ 1350Sqft, ပြင်ဆင်ပြီး၊ 1M,2B,FF
၅၂ လမ်း အခန်းကျယ် (၂၅ x ၅၀ပေ) ဌားမည်
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နားအေးပါးအေး နေချင်သူများအတွက် ၅၂လမ်း အခန်းကျယ် 25 x 50, 4th Floor, 3BR, တစ်ခန်းလုံး ကြွေပြားခင်း၊ မီးဖုိုချောင်ကြွေပြားခင်းအလွန်သန့်ရှင်း၊ A/C3လုံးပါ၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်း၊...
GEMS Condo တွင် အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
$ 1,550 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
GEMS Condo တွင် 900sqft . မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂအစုံပါဝင်သောကွန်ဒိုခန်း အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
ကျိုက်​ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ​ပေါ် ၊ အခန်းကျယ်​ ၊ ရုံးခန်းဖွင့်​ရန်​​ကောင်း ၊ ကားမှတ်တိုင်​နီး ၊ ဘဏ်​နီး ၊ ၁၆x၆၀ ​ပေ ၊ ​ကြွေခင်း ၊ Hall ၊ ၃သိန်း၅သောင်း
ရွှေဇမ္ဖူဒိပ်ကွန်ဒို တွင် ကွန်ဒို အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။
ရွှေဇမ္ဖူဒိပ်ကွန်ဒိုတွင် (2100sqft) မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း , အဲကွန်း -4လုံး , ဖုန်း အမြန်ငှားရန်ရှိသည်။ အလုံမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသဖြင့်...
01248209,09 7811 39940, 09 4200 97550
ဗဟန်း၊ ယုဇနတာဝါတွင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန် ကောင်းမွန်သော အခန်း ငှားမည်။
25 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ဗဟန်း ယုဇနတာဝါ 3000sqft > 25Ls> Hall ပြင်ဆင်ပြီး <ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်း> ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လူနေထူထပ်လှသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း...
ဗဟိုလမ်းမပေါ်တွင် ဓာတ်လှေကားပါဝင်သော အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်။
အကျယ်အ၀န်း 20x63 ပေရှိသော ကျယ်ဝန်းသော ဧရိယာရှိသည့် ပြင်ဆင်ပြီး ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်း ဈေးနှုန်းတန်သည့် အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းအငှားဖြစ်သည်။ Aircon3လုံးပါရှိသည်။
ပါရမီလမ်းမပေါ် ရန်ကင်းတွင် အာစီတစ်ထပ်အိမ် ငှားမည်။
100 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ပါရမီလမ်းမပေါ် ရန်ကင်း 90’x90’ >1RC >100Ls ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေ သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Passport ရုံးကြီး၊ တယ်လီနောရုံးချုပ်၊...
၁၆၅၀ စတုရန်းပေ ၊ မောင်မောင်တာဝါ(ပရိဘောဂပါပြီး)
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် (1650 sqft) မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း , ပရိဘောဂ ကျောင်းနီး ၊ ဈေးနီး ၊ မှတ်တိုင်နီး ၊...
ရုံးခန်း ၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော (1350 စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းသည့်အခန်းဖြစ်သည်.. အခန်း (1MBR,2BR) ခန်းဖွဲ့ပေးထားပြီး Aircon (2)လုံးတပ်ဆင်ထားပါသည်.....
သီရိမင်္ဂလာလမ်း တွင် (45x90) အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
(45x90) ပေ . မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း , အဲကွန်း -3လုံး , ဖုန်း, 2RC မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သော လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှား ရန်ရှိသည်။
အလုံ၊ River View Condo တွင်အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
- 1650 Sqft - 1Master &2Single Room, ကျွန်းပါကေးခင်း - အလွှာမြင့်
Star City Condo for Rent (Star City Condo တွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော ကွန်ဒို အခန်းအား ငှါးရန်ရှိသည်။)
* Star City Condo, Thanlyin Tsp. * Condo , 5th Floor * 937 sq-ft * 1 Master bedrooms, 1 Single bedrooms, living room, kitchen, bathrooms, toilets * AC, Furniture, Lift * Fully renovated room * Price - 1000 USD သံလျင်မြို့နယ်၊ Star City Condo တွင် အဆင့်နေထိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်မွန်းမံထားသည့် အခန်းငှားမည်။ ၉၃၇...
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော လုံးချင်းအိမ် အငှား
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော လုံးချင်းအိမ် အငှား မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီး အာစီနှစ်ထပ် လုံးချင်းအိမ် ၄၅၀၀ စတုရန်းပေ (ပေ ၅၀ × ပေ ၉၀) Hall ခန်းကျယ်...
Fully Furnished of Star City Condo for Rent . (ပရိဘောဂအပြည့်အစုံဖြင့် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုခန်း ငှားမည်)
$ 1,100 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Location : Star City Condo , TahnLyinn Tsp , Yangon . Area : 1185 Sqft Type : Condo Roomtype : 1 Master Bedroom , - Single Bedroom , Fully- Furnished , Ready to stay. တည်နေရာ - Star City Condo , သံလျင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့ ၊ အကျယ်အဝန်း - ၁၁၈၅ စတုရန်းပေ အမျိုးအစား - ကွန်ဒို အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ -...
20 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် (1800)sqft 1F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၃)လုံး၊ ပြင်ဆင်ထားသော တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
17 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် (1800)sqft 7F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပရိဘောဂပါ၊ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
150 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
မြေ(2)ဧက ဂို( 140'×300')315KVA အိမ်သာ (၁၀)လုံးပါ Off( 40'×50') 2ထပ် /2 လုံး 150 သိန်း အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
- စံပယ်ဖြူကွန်ဒို - (အလွှာမြင့်) - မာစတာခန်း(၁)ခန်း၊ အဲကွန်း(၆)လုံး၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံနှင့်...
Fully Furnished Condo For Rent At New Excellent Condo, Dagon
အမှတ် (၄၆) ၊ Apt. G2C, ပထမထပ်၊ ပန်တျာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော New Excellent Condo ငှားရန်ရှိပါသည်။ 1500 စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းပြီး မာစတာအိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ စာကြည့်ခန်း၊...
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် (25 x 36) GF ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ RCခင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
1.80 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
$ 900 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (1400)sqft 4F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရေပူရေအေး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (17x60) 1MBR,3AC,F.Fur, ပါကေး ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
အဆင့်ပြင်ဆင်ထားသော ပုလဲကွန်ဒိုတွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
- 1800 Sqft - 1Master Room,2Single Room, Living Room, Internet, Fully Furnished, ကျွန်းပါကေးခင်း - အလွှာမြင့်
Hill Top Vista Condo တွင်ကွန်ဒိုအခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Hill Top Vista Condo , 1600 Sqft, အလွှာမြင့် Master Room(2) , Single Room(1), Air Con (4), Fully Furnished, ပါကေး /ကြွေပြားခင်း၊ Car Parking, swimming pool, Security,
မာလာမြိုင်လမ်းသွယ် တွင် (50x100) အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
(50x100) ပေ . မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , အဲကွန်း -3လုံး , 1RC+2BN ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သော လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှား ရန်ရှိသည်။
ဗဟန်း တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်ရှိ လူနေ/ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသော ကွန်ဒို အခန်းကျယ် ငှားမည်။...
ဗဟန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်မှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးကွန်ဒိုငှားမယ်နော် Myanmar Plaza,Yankin Center,အင်းယားကန်တို့နဲ့နီးအတွက် သွားလာရ အဆင်ပြေပါတယ် - Location ; Bahan township,New University Avunue Road Near Myanmar Plaza , Yankin...
ပြည်ထောင်စုလမ်းမအနီး အသင့်နေလုံးချင်းတိုက် ငှားမည်။
4.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
အကျယ်အ၀န်း 40x60 ပေရှိ ခြံဝန်းကျယ်နှင့် တစ်ထပ်ခွဲတိုက်တွင် အိပ်ခန်း ၃ ခန်း ပါရှိပြီး ကြွေပြားခင်းထားသည်။ ပြည်ထောင်စုလမ်းမသို့ တိုက်ရိုက်အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်သည့်အပြင် မှတ်တိုင်၊...
Royal ဆင်မင်းကွန်ဒိုတွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
- 1500 Sqft - 1 Master &2Single Room,5air-con, Fully Furniture - အလွှာနိမ့်
* 950sqft, Gems Condo For Rent In Hlaing Township., *
* Condonimium for Rent * Area - 950sq ft * Place – Gems Condo, Hlaing Township. * Room Type - 1 Master bedroom, 1 Normal bedroom, Living room, dining room, kitchen. *4Air Cons are supplied. _Located at Hlaing Township. _Has very good transportation options. _That's why can go to everywhere, shopping and eat easily. _It is wide and suitable to live not only Myanmar nations but also Foreigners. _Security is provided for residents to be safe and sound.
အင်းစိန်မြို့နယ် , ဂျပန်လမ်းမပေါ် , ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာ , လုံးချင်းအိမ်ဌားမည်
အင်းစိန်မြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ဌားမည် နိုင်ငံခြားသား_ရုံးခန်း လက်ခံပါသည် Fully_Furnished တစ်လ_$ 7000_ညှိနှိုင်း...
(1100 Sqft)Royal Orchid Condo တွင် (အလွှာနိမ့်)အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
- Royal Orchid Condo (အလွှာနိမ့်) - 1100 Sqft - 1Master, air-con, Fully Furnished, internet အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
GEMS Condo တွင်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ငှားမည်။
အကျယ်အ၀န်း 900 စတုရန်းပေ ရှိပြီး Master Bedroom ၁ ခန်း၊ Single Bedroom ၁ ခန်းပါရှိသည်။ ပါကေးခင်းထားပြီး Aircon3လုံး တပ်ဆင်ထားသည်။ ကွန်ဒိုတွင် Swimming Pool and Gym room ပါရှိသည်။
(2000 sqft) ကျယ်ဝန်းသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှင်စောပုလမ်းရှိကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
23 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
စမ်းချောင်း၊ရှင်စောပုလမ်း အကျယ်အ၀န်း - 2000sqft,၇လွှာ မာစတာအိပ်ခန်း ၂ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၁ခန်း ရေချိုးခန်းအိမ်သာ...
095021284, 09965021284, 09421021969
7 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် (12.5 x 50) GF+1F ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ကြွေခင်း၊ ထပ်ခိုးပြည့်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန်ကောင်းသော မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
ပေ၈၀×ပေ၉၀၊ ၂ထပ်ခွဲ လုံးချင်းအိမ် ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်
လှိုင်မြို့နယ်၊ မြကန်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း ၊ အဲကွန်း(၁၀)လုံး ၊ ပါကေးခင်းထား ၊ ဖုန်း ၊ မီးစက်၊ ရေကူးကန် ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၅)လုံး ၊...
$ 3,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
N0.36 37 Block C Yadanar Eain Yar 200'X 100' sq feet Fully brick wall
095021351, 09254292350, 09784137622
$ 1,400 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Sanyeit nyein , royal land condo 1400 sq ft, 6th floor, room number 6A3bedrooms ( 1 master bedroom , 1 single bedroom with readymade shower room ,1 single bedroom ) Living room , kitchen ( including exhaust fan) , dining room , common bathroom and toilet ( every room is FULLY furnished and air conditioner attached ) San yeik nyein 6th Street , Kamaryuk Township 1400$/ per month The condo has security Guards , Cctv, basement car parking, lift - contact Address - university of...
095160575 , 09261452105
ပေ၇၀xပေ၈၀ ၊ ၂ထပ်လုံးချင်းတိုက်၊ ပရိဘောဂပါပြီး
$ 4,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် ၊ Micasa Hotel အနီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ မာစတာအိပ်ခန်း(၄)ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၄)ခန်း ၊ အဲကွန်းပါ ၊ ဖုန်းပါ ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၄)လုံး ၊...
ပြုံးပြုံး appartement တွင် (3000sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှာမည်။
လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် (3000sqft) 3MBR,AC,F.Fur ပါဝင်သောကွန်ဒိုအမြန်ငှာမည်။
36 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
- 50' x 70' -3Master Room,2Single Room,5Air-con, ပါကေး+လျှာထိုးခင်း
Hill Top Vista Condo တွင် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
$ 3,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
Hill Top Vista Condo , 1900 Sqft, 3300 U$, အလွှာမြင့် Master Room(3), Single Room(1), Air-con(5), ဘုရားခန်း၊ ထောင့်ခန်း ရွှေတိဂုံးဘုရား, River View များနှင့်စိတ်အပန်းပြေစေနိုင်ပါသည်။
မြောက်ဒဂုံ 29 ရပ်ကွက်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်းတိုက်ငှားမည်။
အကျယ်အ၀န်း 40x60 ပေရှိပြီး နှစ်ထပ်တိုက်တွင် အောက်ထပ် Hall type ဖြစ်ပြီး အပေါ်ထပ်တွင် အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါရှိသည်။အောင်သစ္စာလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ဈေးကျောင်းမှတ်တိုင်အနီးတွင်တည်ရှိသည်။
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် တွင် ဂိုဒေါင် နှင့် ရုံးခန်း ငှားမည်။
48 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် ဂိုဒေါင် >150’x80’ Office >30’x30’ 315 KVA 1sqft >400kyats လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် တည်နေရာအနေအထားအရ မြို့တွင်းဧရိယာများနှင့် အလှမ်းဝေးသော်လည်း...
Orange Condo သင်္ဃန်းကျွန်း တွင် ပြင်ဆင်ပြီး အခန်း ငှားမည်။
Orange Condo သင်္ဃန်းကျွန်း 1350sqft >10Ls > မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း / ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း / အဲကွန်း -7လုံး ပြင်ဆင်ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိသောကြောင့် ကားမှတ်တိုင် နှင့်...
၈၀ပေ × ၂၂၄ပေ ၊ ဂိုဒေါင်
78 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
အုတ်ကျင်း သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်နား ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြေတွဲသုံး ဂို( 80'×224' ) ရေမီး အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမြန်ငှားမည် MGW Condo
ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် (1500)sqft 7F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ဖုန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုိက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
ဖွံ့ဖြိုးအောင်အိမ်ရာ ရန်ကင်းတွင် အာစီ နှစ်ထပ်ခွဲ တိုက် ကောင်း ငှားမည်။
$ 14,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ဖွံ့ဖြိုးအောင်အိမ်ရာ ရန်ကင်း 120’ x95’>21/2RC>14000$ မာစတာအိပ်ခန်း - 8 ခန်း / အဲကွန်း / ဖုန်း / ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေ သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Passport...
Junction 8 အပေါ်ထပ် မြိုင်ဟေဝန်Condo ၇လွှာမှ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ငှားရန်ရှိသည်
ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာဖြစ်သော ၈မိုင်လမ်းဆုံမှ Junction 8 Centerအပေါ်ထပ်ရှိ မြိုင်ဟေဝန် Condoမှ အခန်း ငှားလိုပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နှင့်လည်းနီး၊ မြို့ထဲသို့ သွားရန်လွယ်ကူ၊...
095132343, 09459943920, 09955132343, 01543338
Grand Myay Nu Condo တွင် (2200-2500 sqft)အလွှာမြင့် အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
$ 2,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
- GRAND MYAY NU CONDO (အလွှာမြင့်) - 2200-2500 sqft - မာစတာအိပ်ခန်း -3ခန်း ၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ အသေးစ်ိတ်သိလိုပါဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး နေရာထိုင်ခင်း...
( 3000 Sqft ) အင်းယားလမ်း Penthouse Condo ငှါးမည်
$ 3,500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
အင်းယားလမ်းမပေါ် သစ်သီးတန်းအနီးရှိ Penthouse, Sq-Feet -3000, မာစတာအိပ်ခန်း -2ခန်း , ရိုးရိုးအိပ်ခန်း - 1 ခန်း , ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ , ကားပါကင်ပါ ,...
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် (20 x 60) 1F ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ လျှာထိုး၊ ဘိုထိုင်၊ ဖုန်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
၁၃၅၀စတုရန်းပေ ၊ ၃လွှာတိုက်ခန်း ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်
6.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ၄၈လမ်း ၊ ရန်က�